Were na ọdọ mmiri pink, Ọdọ Hillier | Njem zuru oke
Foto | Akwụkwọ ahụaja
Etwa mbara ala bụ ebe na-adọrọ adọrọ nke na-anaghị akwụsị ịtụ anyị n'anya. You maara na Ọstrelia nwere ọdọ mmiri nke mmiri ya na-acha pinki pinki? Ọ bụ Ọdọ Hillier, ọdọ mmiri nke ihe omimi sitere na Middle Island, agwaetiti kachasị na agwaetiti Australia nke La Recherche.
Notbanye ebe Lake Hillier dị adịghị mfe. Otutu mmadu enweghi ohere ihu ya na mmadu n'ihi na nchedo gburugburu, ihe kariri inwere ike ifefe n'elu agwaetiti ka i lee ọdọ mmiri n'ụgbọ helikọpta na-apụ kwa ụbọchị site na ọdụ ụgbọ elu Esperance.
Ọ bụrụ n ’ọdịn’iru ị ga - achọ ime njem gaa Australia ịmara ọmarịcha ala ya, ọdịdị ya na ebe pụrụ iche dịka Ọdọ mmiri HillierMgbe ahụ m ga-agwa gị n'ụzọ zuru ezu ihe niile gbasara ọmarịcha pink a mara mma.
1 Gịnị bụ Ọdọ Hillier?
2 Onye chọtara Lake Hillier?
3 Kedu ka esi achọpụta Lake Hillier?
4 Kedu ihe kpatara mmiri dị n'Ọdọ Mmiri Hillier?
5 Kedu ka esi aga eleta Lake Hillier?
6 Ọdọ mmiri ndị ọzọ pụrụ iche n’ụwa
6.1 Ọdọ nke Clicos (Spain)
6.2 Osimiri Kelimutu (Indonesia)
6.3 Ọdọ Moraine (Canada)
6.4 Ọdọ Natron (Tanzania)
Gịnị bụ Ọdọ Hillier?
Osimiri Hillier bụ ọdọ mmiri 600 mara mma nke dị ogologo na Middle Island, agwaetiti kasị ukwuu na agwaetiti La Recherche na Western Australia,, n'oké ọhịa nke nwere nnweta siri ike. Ọ ghọọla onye ama ama n'ụwa niile maka agba dị iche na mmiri ya, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe nnabata. Ahụmịhe ọhụụ dị ịtụnanya!
Foto | Gaa na-amụ Australia
Onye chọtara Lake Hillier?
Nchọpụta nke Ọdọ Hillier na Australia nke onye na-ese foto na onye na-akwọ ụgbọ mmiri bụ onye Britain bụ Flinders mere na XVIII narị afọ. Onye na-eme nchọpụta nke ghọrọ onye a ma ama n'ihi na ọ bụ onye mbụ na-aga nnukwu agwaetiti Australia ma bụrụkwa onye dere akwụkwọ nyocha nke bara oke uru, ọtụtụ n'ime ya bụ ndị Oceania. Otu kọntinent nke dị n'ime ime ya bụ ụfọdụ ụdị ọdịiche kachasị dị egwu na nke mara mma n'ụwa.
Kedu ka esi achọpụta Lake Hillier?
N'ụbọchị njem ahụ na Middle Island, Ndị Flinders kpebiri ịrịgo elu kachasị elu ka o wee nwee ike nyochaa gburugburu ya. Ọ bụ mgbe ahụ ka ọ tụrụ ya n'anya n'onyinyo ahụ na-enweghị atụ nke pụtara n'ihu ya: nke nnukwu ọdọ mmiri na-egbuke egbuke nke aja na oke ọhịa gbara ya gburugburu.
Onye ụjọ ọzọ na-atụ ụjọ, John Thistle onye isi ụgbọ mmiri njem, egbughị oge ịgakwuru ọdọ mmiri n'onwe ya iji hụ ma ihe ọ hụrụ ọ bụ eziokwu ka ọ bụ mmetụta anya. Mgbe ọ bịarutere, o nwetara nnukwu ihe ijuanya ma egbula oge were nnara mmiri site n’Ọdọ Mmiri Hillier iji gosi ya ndi ozo ibe gi. Ọ ka nọ na-enwe odo odo ya na-acha odo odo na-apụtabeghị oke mmiri. Gịnị ka ọ pụtara?
Kedu ihe kpatara mmiri dị n'Ọdọ Mmiri Hillier?
Ọ bụ nnukwu ihe omimi nke Ọdọ Mmiri Hillier na Onweghi onye kpughere 100% bụ ihe kpatara mmiri ya jiri pink. Ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta na-eche na ọdọ mmiri nwere agba a n'ihi nje ndị dị na nnu nke nnu. Ndị ọzọ na-ekwu na ihe na-akpata ya bụ ngwakọta nke Halobactoria na Dunaliella salina. N'akụkụ a, enwebeghị nkwenye sayensi ọ bụla ka ihe kpatara bụrụ ihe enigma.
Kedu ka esi aga eleta Lake Hillier?
O kwuru na Lake Hillier dị na Middle Island, agwaetiti kachasị na agwaetiti Australia nke La Recherche. Ebe ọ bụ na ịnweta dị mgbagwoju anya, Nleta nke ọdọ a nwere ike ịme site na iji helikọpta si n'ọdụ ụgbọ elu Esperance na-efegharị ebe ahụ. Ọ bụ ọrụ dị oke ọnụ, kamakwa ọ bụ ahụmịhe.
Ọdọ mmiri ndị ọzọ pụrụ iche n’ụwa
Foto | Rauletemunoz maka Wikipedia
Osimiri dịka Michigan, Titicaca, Tanganyika, Victoria ma ọ bụ Baikal bụ ụfọdụ n'ime ọdọ mmiri ndị kachasị ewu ewu n'ụwa.
Agbanyeghị, na kọntinenti niile enwere ụche mmiri ndị ọzọ amachaghị nke na-ejikwa ọkụ nke ha na-enwupụta maka ebumnuche mbụ ha, ma ọ bụ n'ihi ngwakọta nke mmiri ha, ọrụ nke okpomọkụ dị elu na ha ma ọ bụ ihe ndị dị n'ime ha. N'ihi ya, Gburugburu ụwa enwere ọdọ mmiri ndị mara mma nke agba agba dị mma ileta.
Ọdọ nke Clicos (Spain)
Na Spain enwere oke ọdọ mmiri peculiar yiri Hillier mana mmiri ya anaghị egbuke egbuke pink ma emerald green. A maara ya dị ka Ọdọ Mmiri nke Clicos ma dị n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke obodo Yaiza (Tenerife) n'ime ogige ntụrụndụ nke Los Volcanes.
Ihe na-eme ka ọdọ mmiri a dị iche bụ agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke mmiri ya n'ihi ọnụnọ nke ọtụtụ ihe ọkụkụ ihe ọkụkụ na nkwusioru. A na-ekewa ọdọ mmiri Clicos n’oké osimiri site n’oké osimiri juru n’ahụ ma jikọta ya na ya site na mgbawa ala. Ọ bụ mpaghara echedoro ka ị ghara igwu mmiri.
Osimiri Kelimutu (Indonesia)
Na Indonesia e nwere ebe a maara dị ka agwaetiti Flores ebe Kelimutu ugwu mgbawa, nke nwere ọdọ mmiri atọ mmiri ha gbanwere agba: site na turquoise na-acha uhie uhie site na ọchịchịrị na-acha anụnụ anụnụ na aja aja. Apụghị ikweta eziokwu? Ọ bụ ihe ọhụụ kwesịrị ịhụ nke na-eme n'ihi nchikota gas na vapo na-apụta site na ime ugwu mgbawa ma mepụta mmeghachi omume kemịkal dị iche iche mgbe okpomọkụ dị elu.
N’agbanyeghi ugwu mgbawa na-agba agba, mgbawa Kelimutu ikpeazụ bụ na 1968. Na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, e kwupụtara gburugburu ya ogige ogige mba na Indonesia.
Ọdọ Moraine (Canada)
Oduru na Alberta’s Banff National Park bu Moraine Lake, a mara mma ọdọ mmiri nke glacial mbido onye ufiop-acha anụnụ anụnụ mmiri na-abịa si gbazee.
Gburugburu ebe obibi ya dị oke egwu dịka nnukwu ugwu nke Rockies gbara ya gburugburu na Ndagwurugwu nke Ten Ten. Site na nzere ndị a, ìgwè ndị njem na-aga Moraine Lake iji were echiche ha. Mmiri ya na-enwu n'ike n'ike n'ehihie, mgbe ìhè anyanwụ na-abanye na ọdọ mmiri ozugbo ọ dị mma ịga ihe mbụ n'ụtụtụ ịga hụ ya, mgbe mmiri ahụ yiri ka ọ na-apụta ìhè karịa ma gosipụta ọmarịcha ọdịdị nke ejiri ya rụọ.
E wezụga nke ọdọ mmiriN'otu Banff National Park bụ Peyton na Louise ọdọ mmiri, dịkwa mma.
Ọdọ Natron (Tanzania)
Emi odude ke adan̄a ke ufọt Tanzania ye Kenya, Ọdọ Natron Ọ bụ ọdọ mmiri nnu nnu, nke dị na nnukwu Ndagwurugwu Rift. N'ihi sodium carbonate na ogige ndị ọzọ na-asọba na ọdọ mmiri si n'ugwu ndị gbara ya gburugburu, mmiri alkaline ya nwere pH dị egwu nke 10.5 n'ihi sodium carbonate na ogige ndị ọzọ dị na mineral.
Ọ bụ mmiri dị egwu nke na ọ nwere ike ịmịpụ anya na anụ ahụ nke ụmụ anụmanụ na-abịaru ya nso, nke nwere ike ịnwụ site na nsị. N'ihi ya, Lake Natron o biliela na aha ndị kacha gbuo mmadụ na mba ahụ.
Mana banyere ọdịdị ya, ọdọ mmiri a nwere agba pụrụ iche na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ pink, mgbe ụfọdụ ọbụna oroma na mpaghara ndị dị ala, n'ihi microorganisms nke na-ebi n'ime eriri nke nnu alkaline mepụtara. Zingtụnanya!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Were na ọdọ mmiri pink, Ọdọ Mmiri Hillier